I-Gavoa flat resort Itamaracá Maria Farinha Igarassu - I-Airbnb
I-Gavoa flat resort Itamaracá Maria Farinha Igarassu
170 okushiwo abanye
Igarassu, Pernambuco, i-Brazil
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Joseph
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Joseph izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
UKUNGENA KANYE NOKUPHUMA AKUGUQUKEKILE!!! I-Flat ebheke ogwini kanye nesiqhingi ithwesa umqhele indiza e-Igarassu futhi ibheke i-Imaracá esiteshini sase-Santa Cruz, eduze no-Maria Farinha no-Itamaracá. Igumbi lokulala elilodwa, igumbi lokuhlala, ikhishi kanye negumbi lokugezela elilodwa, indawo yokubhukuda, indawo yokosa inyama, igumbi lemidlalo/i-tv, indawo yokuzivocavoca, inkundla yezemidlalo, i-marina yezikebhe kanye ne-jetski, izinkambo zasolwandle kanye nendawo yokudlela yase-marina. Inekheshi, izokuphepha ezihlomile zamahora angama-24. Ukupaka, umzila wezindiza ezincane, i-helipd. I-Aerodrome eduzane.
Ifulethi/ifulethi linendawo yokuphumula, ikamelo lokulala, igumbi lokugezela kanye nekhishi futhi linefenisha ngokugcwele i-TV, isiqandisi, isitofu, isiphephetha-moya, izitsha, izinto zokusika, izibuko, ifenisha nezitsha.
I-condominium ine-swimming pool, inkundla yokudlala yezingane, i-marina yezikebhe nokugibela emanzini, indawo yokudlela, ukufinyelela olwandle, indawo yokubhaka, indawo yokupaka, igumbi lemidlalo/i-tv, indawo yokuzivocavoca kanye nenkantolo. Kukhona indlela yendiza yendiza encane yohlobo lwe-ultra light kanye ne-helipad yezindiza ezinophephela emhlane. Kukhona nenkundla yezindiza eseduze yezindiza ezincane.
4.71 out of 5 stars from 170 reviews
4.71 · 170 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-170
I-condominium itholakala endaweni ethule, enabantu abambalwa bemidlalo yasolwandle kanye nesifunda sokungcebeleka. Kukhona ihlathi lase-Atlantic ngemuva kwe-condominium. Isiqhingi sase-Itamaracá kanye nesiqhingi sase-Coroa do Avião ziphambi kwe-condominium, futhi zingafinyelelwa ngohambo oluthengiswa e-Marina ye-condominium. Isikhungo seNova Cruz siqhele ngamakhilomitha angu-2. Isikhungo sase-Igarassu siqhele ngamakhilomitha angu-15. Eduze kweVeneza Water Park eMaria Farinha (5km cishe) usebenzisa isikebhe iNova Cruz.
Comprometido em oferecer uma boa e tranquila hospedagem!
Ngizotholakala ngomakhalekhukhwini nganoma yisiphi isidingo.
Izilimi: English, Português
Hlola ezinye izinketho ezise- Igarassu namaphethelo